ကမ္ဘာပေါ်မှာ စည်းကမ်းအကြီးဆုံး စစ်တပ် များ – CantWait2Say
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စည်းကမ်းအကြီးဆုံး စစ်တပ် များ
စစ်တပ်တိုင်းဟာ မ တစ်ထောင်သားတွေ တက်ရောက်ကြတဲ့ ၊ လာရောက် အမှုထမ်းကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တာနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်ရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး ။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်တိုင်းလိုလိုမှာ စည်းကမ်းကို အဓိက ထားပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်အုပ်ချုပ်ပြီး စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက် ရင်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူ အပြစ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အောာက်မှာ ဖော်ပြထားတာ က အဲဒီလို စည်းကမ်းတင်းကျပ်ပြီး အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ စစ်တပ်တွေထဲက ထိပ်ထပ်ကြဲတွေ ကို ရွေးထုတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ သြစတြေးလျ ရဲ့ Z Force
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေထဲမှာ အပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ Z Special Unit ဟာ တက်ကြွတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စည်းကမ်းသေ၀ပ်မှု ၊ အမိန့်နာခံတတ်မှုတွေကြောင့် အထူး ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကနေ ကမ်းတက်လာမယ့် ဂျပန်ဖက်ဆစ်တွေ ရဲ့ အန္တာယ်ကို တွန်းလှန်ဖို့ အဓိက စိုင်းပြင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ၄ နှစ်တာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ Z Special Unit ဟာ အဲဒီတုန်းက ထောက်လှမ်းရေး ၊ တိုက်ခိုက်ရေး နဲ့ လူနာပြုစုရေး သုံးမျိုး ကို အဓိက တာဝန်ယူပါတယ်။
သြစတြေးလျ ရဲ့ နာမည်ကျော် တီဗွီစီးရီး ဖြစ်တဲ့ Spy Force မှာ သူတို့ နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဂျပန်တွေ ဟာ စင်္ကာပူကျွန်းနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာ ဂျပန်ရေတပ်သဘောင်္တွေကို ကောင်းကောင်းမြုပ်ပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တပ်ဖွဲ့အဖြစ် လူသိများပြီး သူတို့ ရဲ့ အောင်ပွဲတွေဟာ စည်းကမ်းတင်းကျပ်မှုကနေ ရရှိခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
၉ တရုတ်ပြည့်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်
မာနထောင်လွှားမှု နဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်း ကို ငယ်စဉ်ကတည်း က သင်ကြားပေးတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး စစ်တပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဥပဒေ အရ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပြီး အရွယ်ရောက်တဲ့ ယောက်ျားတိုင်းဟာ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ကနေ ၃ နှစ် အထိ စစ်မှုထမ်းရပါတယ်။ Zhurihe စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာ သင်ကြားပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ မြေပြင်တိုက်ပွဲ နဲ့ အတူတူ ကမ်းတက်တိုက်ပွဲ ၊ ပင်လယ်ပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုလည်း သင်ကြားပေးပြီး လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေ အတွက်တော့ သီးခြားနေရာတစ်ခု ထားရှိပါတယ်။ လေကြောင်းပစ်ကူ နဲ့ မြေပြင်တိုက်ပွဲ နဲ့ ပေါင်းစပ်လေ့ကျင့်ရမယ့် နေရာကလည်း သီးသန့် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကြည်း၊ ရေ ၊ လေ ၃ မျိုးစလုံးအတွက်ကတော့ သင်တန်းတိုင်းကနေ ထူးထူျးချွန်ချွန် နဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး စစ်တပ်ထဲမှာလည်း ဆက်လက်ပြီး အမှုထမ်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဌာနချုပ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည့်သူ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်မှာ အများအားဖြင့်တော့ အမြဲတမ်း စစ်သည်အင်အား အမျာအးပြား ရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို များပြားရသလဲဆိုတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ မှာ ကေဒါ အဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲကမှ မိသားစုတွေ ရဲ့ သား၊ သမီးတွေ ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စစ်တပ် စည်းကမ်းအတိုင်း သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် မောင်းနှင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ် တပ်မတော် ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်နေခဲ့ပြိး အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့လာကျက်မှတ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေ က နေသားကျနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အနာဂတ်မှာ တပ်မတော် ဟာ အရည်အသွေး များစွာ ပြည့်ဝ လာခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးတွေကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ နဲ့ စည်းကမ်းတကျ မွေးမြူဖို့ အတွက် ရန်ပုံငွေ တစ်ခု ထားရှိပြီး အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်မှာ မပျော်ခဲ့ရင်လည်း ထွက်ခွာဖို့ အတွက် အလွယ်တကူ ခွင့်ပြုပြီး ဘယ်လို စည်းမျဉ်းမှ ချုပ်နှောင်ထားခြင်း မရှိပါဘူး ။ စစ်သား တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ ဟာ မလွယ်ကူပါဘူး ။ နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ တပ်မတော်က နုတ်ထွက်သွားတဲ့တိုင် စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း ဆိုတဲ့ ပုံစံကောင်းတစ်ခု ကို သင်ကြားပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
၈ ဖိလစ်ပိုင် NAVSOG & CGSOG
ဖိလစ်ပိုင်တပ်မတော်ကို လူသိမများပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ ပြောက်ကျားစစ်တွေ ဆင်နွှဲနေရတဲ့ သူပုန်တွေ နဲ့ တိုက်ခိုက်နေရတာ က တစ်ကြောင်း ၊ ရေတပ်စခန်း လာဖွင့်ထားတဲ့ အမေရိကန်စစ်ပညာတွေကို သင်ကြားနေရတာက တမျိုး။ အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ပြည့်ဝပြီး နိုင်ငံတကာ စင်မြင့်မှာ ထင်ပေါ်စပြုလာပါတယ်။
စည်းကမ်းပြည့်ဝဖို့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းကိုသာ စည်းကမ်း လို့ မှတ်ယူခဲ့ရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ စည်းကမ်း သဘောတရားမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါ ပါရှိပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက် ဟာ အရက်အလွန်အကျွံ့သောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရင် သူ့ထက် အဆင့်နိမ့်တဲ့ (တပ်သားအဆင့်) လှည့်ကင်းတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အရေးယူ အပြစ်ပေးခံရပါမယ်။ အဲဒီ သံမဏိ ကို ဖိလစ်ပိုင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အထိ သိရှိနားလည်ထားပါတယ်။
အရက်သောက်ခွင့် မရှိဘူး လား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါ။ သောက်ခွင့် ရှိပေမယ့် စစ်ဆေးရေးက စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကို ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်ခဲ့ရင် သူ ဟာ သူ့ရဲ့ တပ်ကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက်နိုင်မလဲ .. ? အခု အချိန်မှာ စခန်းထဲကို ရန်သူ ၀င်လာခဲ့ရင် သူ ဘယ်လို ခုခံမလဲ ??? ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ အတူတူ ကွာတားချပြီး ဖိုင်းတပ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ခြောက်မိုင်လောက်ကို မရပ်မနား ပြေားရပါမယ်။ ၁၈ မိုင် လောက်ကို မရပ်မနား ရေကူး ရပါမယ်။ အရင်က အမည်းစက်တွေလည်း ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ရာထူးဖြုတ်၊ စစ်ထောင်ပို့ ပြီး စစ်သားဘ၀ ကို တစ်ခါတည်း နှုတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။
အခု အချိန်ထိတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဥပမာ တွေ မရှိသေးပေမယ့် အထက်အရာရှိတိုင်းကတော့ သူ့လက်အောက်ငယ်သား တစ်ယောက်ယောက် က သူ့ကို ပြန်လည် ဖမ်းဆီးသွားမှာကို ကြောက်ကြတဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းကြပါတော့တယ်။
ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ပေးလိုက်မှု ပဲ ဖြစ်ပြီး သတိပေးချက် ဒုတိယအဆင့်မှာတင် အားလုံးက စည်းကမ်းကို နားလည်သွားကြပါတယ်။
7.အမေရိကန်ရေတပ် NAVY SEALs
အမေရိကန် ရေတပ် နေဗီဆီးလ် ကို တော့ သိကြမှာပါ။ ပင်လယ်ဖျံ လို့ အမည်ပြောင် မှည့်ခေါ်ထားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံက အထူးစစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ အဖွဲ့ခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ နာမည်က SEAL ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပင်လယ် (SEa) ၊ လေကြောင်း (Air) နဲ့ ကုန်းကြောင်း (Land) တို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကျော် အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင် ကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အသေခံတပ်သား လက်မရွံ့တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေဗီဆီးလ် တွေကို ၁ ကနေ ၈ အထိ ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်..။ တစ်ဖွဲ့စီမှာ တပ်စု ၆စု စီ ရှိပြီး တပ်စုတစ်စုစီမှာတော့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၆ ယောက် ရှိပါတယ်။
စစ်သည် ၁၃ ယောက် အရာရှိနှစ်ယောက်နဲ့ ကွန်မန်ဒါ တစ်ယောက်စီ နဲ့ ဖွဲ့စည်းပါတယ်..။ တပ်စု တစ်စုလုံး လှုပ်ရှားတာ နည်းပါတယ် ..။ တော်တော်ကြီးတဲ့ မစ်ရှင်ကျမှ တပ်စုတစ်စုလုံး သုံးပြီး အများအားဖြင့်ကတော့ တပ်စိတ် နှစ်စိတ် ခွဲပြီး အဲဒီ ထဲကမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် လေးယောက်စီနဲ့ လှုပ်ရှားလေ့ရှိပါတယ်..။
ဘက်ပေါင်းစုကနေ ထူးချွန်ထက်မြက်နေအောင် အမြဲမပြတ် လေ့ကျင့်နေကြတဲ့ အမေရိကန် ရေတပ်ရဲ့ စစ်သားတွေဟာ အရမ်းကို စည်းကမ်းလိုက်နာ ရပြီး တသွေမတိမ်း တိကျရတဲ့အဆင့်ထိ လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ ရေတပ်က အဖွဲ့ခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့်လို့ ကြည်း၊ရေ၊လေ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ခံထားရသူတွေပါပဲ။
သင်တန်းသား အသစ်စုဆောင်းတဲ့နေရမှာတော့ သင်တန်းအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းကို မှတ်သားထားပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်မှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက် အောင်ချက် မရှိရင် ထုတ်ပယ်ခံရပါတယ်။
အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှာ သုံးစွဲတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စကားလုံးက “စည်းကမ်း” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တန်းမှာ အမှတ်ကောင်းလို့ တပ်ထဲ ရောက်လာခဲ့လည်း စည်းကမ်းပိုင်း နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်ပါးတယ် ဆိုရင် ၃ လ နဲ့ တပ်ကနေ နှုတ်ဆက်ရလေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့ကတော့ အချိန်ဇယား အတိုင်း လေ့ကျင့်ပြီး အဲဒီ အချိန်ဇယားတွေမှာ အိပ်ချိန်၊ နဲ့ အနားယူချိန်၊ အားကစား အချိန်တွေပါ သမမျှတအောင် ရောစပ်ထားတဲ့အတွက် နည်းနည်း မှ ခိုကပ်နေလို့ မရပါဘူး။
ရေခဲတမျှ အေးစက်တဲ့ ရေထဲမှာ နာရီပေါင်း များစွာ စိမ်ခံရခြင်း၊ မြေကြီးပေါ်မှာ စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် မိကျောင်းသွား သွားရခြင်း နဲ့ တခြား ကြမ်းတမ်းတဲ့ ပြစ်ဒဏ်များစွာကို ပြဌာန်းထားပါတယ်။
5.အစ္စရေး Shayetet 13
အစ္စရေး ဟာ အယူအဆမတူညီတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ နေထိုင်ရတဲ့ နိုင်ငံပီပီ သူရဲ့ စစ်တပ်ကိုလည်း ထူးချွန်ထက်မြက်နေအောင် အမြဲလို ပြင်ဆင်နေလေ့ရှီပါတယ်။
အဲဒီ အစ္စရေးတပ်မတော်ထဲကနေ တိုးထွက်လာပြီး ထူးချွန်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ အတူတူ လူသိများလာတာက Shayetet 13 ပါ။ Shayetet 13 ဟာ အမေရိကန် က ထိပ်ထိပ်ကြဲ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အတူတူ စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခွင့်ရလိုက်ခြင်း က ထိပ်တန်းအဆင့် တပ်ဖွဲတစ်ခု ဖြစ်လာစေတယ် လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
အတူတူ ပူးတွဲပြီး ကြည်း၊ ရေ ၊ လေ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ပူးတွဲလေ့ကျင့်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲမှာ နေဗီဆီးလ် အကြောင်း ကို သိပြီး လောက်ပြီဆိုရင် နောက်ထပ်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Delta Force အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Delta Force (အမေရိကန်) အဖွဲ့ ဟာ နာမည်မျိုးစုံရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ တပ်ဖွဲ့အကြောင်း၊ တပ်ဖွဲ့မိသားစုဝင်တွေ အကြောင်းကို ခြေရာခံလို့ မရအောင် အမြဲတမ်းလို ကိုယ်ယောက်ဖျောက်နေလေ့ရှိတဲ့ တပ်ဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Delta Force ဆိုတဲ့ အမည်နာမ နဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် စစ်ဆင်ရေး အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရဲ့ အလျှို့ဝှက်ဆုံးတပ်ဖွဲ့တစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန် ရဲ့ အထူးထောက်လှမ်းရေး Special Agent Service (SAS တပ်ဖွဲ့) ကနေ စတင်ပြီး အုတ်မြစ်ချ ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ အဖွဲ့ဟာ စစ်တပ်မဆန်ဘဲ သူလျှို နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဘက်ခြမ်းကို ပိုပြီး လှုပ်ရှားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး၊ ဓားစာခံကယ်တင်ခြင်း စတဲ့ အထူးစီးနင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရဲ့ အမိန့်အရ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Delta Force က ပြည်ထဲရေးဌာန နဲ့ ပိုပြီး ဆက်နွယ်နေပေမယ့် ၀န်ထမ်ေးတွကတော့ အမေရိကန်စစ်တပ်အတွင်း ကနေ သာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး အပြင်လူ လုံးလုံး လက်မခံပါ။ နည်းစနစ်​ပိုင်း၊ ပစ်ခတ်မှု အပိုင်း ၊ ကယ်တင်မှု အပိုင်း ၊ နှိမ်နင်းမှု အပိုင်း တွေနဲ့ အတူတူ ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲ မှာ ရုန်းထွက်ဖို့ နဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ တွေကို ပိုပြီး ဦးစားပေး သင်ကြားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၃ ရှိတဲ့အတွက် ထူးချွန်တဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ အတူတူ တိုက်ခိုက်ရည်ပြည့်ဝခြင်း ၊ အမိန့်နာခံခြင်း ၊ စည်းကမ်းသေ၀ပ်ခြင်း တို့ က သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Shayetet 13 ဟာ ကမ္ဘာကျော်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အတူတူ ယှဉ်တွဲလေ့ကျင့်ခွင့်ရပြီး နောက် တစ်စစ အစွမ်းပိုထက်လာပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး နည်းပညာတွနဲ့ ကာကွယ်ရေး အင်အားစုကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထုတ်ဖော်မပြောကြားပါဘူး ။
4ဗြိတိန်နိုင်ငံ ရဲ့ MI6
တကယ်လို့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် MI6 ကို သိရှိမှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ Mr.Bean မစ္စတာဘင်းကို ကြည့်ဖူးရင်တောင်မှ ဒီ အဖွဲ့ကို သိမှာပါ။ သူတို့ ဟာ အထူးထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ထောက်လှမ်းရေး တွေလို့ မခေါ်ပဲ လျို့ဝှက်လူသတ်သမားများ အဖြစ်သာ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူသစ်တွေကို စုဆောင်းတဲ့နေရာမှာ အဲဒီ လူငယ် ဟာ ဘယ်လို မျိုး စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတတ်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက် ၁ ချက်ကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါတယ်။
သူတို့ရဲ တပ်ဖွဲ့ဟာ Secret Intelligence Service (SIS) အောက်မှာ ရှိပြီး အဲဒီ အဖွဲ့ကိုတော့ MI6 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထင်ထင်ရှားရှား သိတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဟာ MI6 က လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး သမား အမှတ်စဉ် (၀၀၇) ဖြစ်ပါတယ်။
MI5 ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ The Security Service ကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်ဘုရင်မ ရဲ့ လက်အောက်မှာ ထားရှိပြီး ဘုရင်မကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ၅ တို့ ၊ ၆ တို့ ဆိုတဲ့ နံပါတ်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ Section ကို ကိုယ်စားပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ခွဲ ၃ တို့ ၊ ဘဏ်ခွဲ ၄ တို့ နဲ့ ဆင်တူပြီး နံပါတ်တွေကွဲပြား သလို လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ကွဲပြားပေမယ့် MI (Military Intelligence) ဌာနချုပ်ကတော့ တစ်ခုတည်း ပါပဲ ။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားတွေထဲမှာ သဏ္ဍန်လုပ် ပါဝင်တဲ့ Agent Q ဆိုတာ အပြင်မှာလည်း တကယ် ရှိတာ ဖြစ်ပြီး Agent Q ဟာ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက် လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ နဲ့ နည်းပညာတွေကို ပံ့ပိုးဖို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုတော့ မိန်းကလေး တွေနဲ့ ရှုပ်ပွေနေလို့ မရဘဲ စည်းကမ်းကို အတင်းကြပ်ဆုံး ဥပဒေ အဖြစ် သဘောထားရပါတယ်။ ဒီနေရမှာ MI6 အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအဖို့ သူတို့ကိုယ်စီ ရဲ့ စည်းကမ်း ဟာ သူတို့ကိုယ်စီ ရဲ့ “ အသက် “ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းဖောက်ရင် “ အသက်” ပေးလိုက်ရမှာ သေချာပါတယ်။
3ြေ.မာက်ကိုရီးယားရဲ့ မုန်တိုင်း တပ်ဖွဲ့
မြောက်ကိုးရီးယားစစ်တပ်ဟာလည်း စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အရှိဆုံး နဲ့ အထူးချွန်ဆုံး တပ်သားတွေ အဖြစ် ရွေးထုတ်ပြရမှာပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် ရဲ့ ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေ မရှိတော့ဘဲ လေးရာသီလုံးလုံး စစ်ရိပ်၊ စစ်ငွေ့ တွေသာ ယှက်သန်းနေလေ့ရှိတယ် လို့ ပြောပြရင် လွန်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး ။ ခေတ်မှီလွန်းလှတဲ့ လက်နက် တွေကြောင့် မြောက်ကိုရီးယား စစ်တပ်ကို တော်ရုံ နဲ့ တော့ အထင်မသေးရဲပါဘူး။ နောက်တစ်ကြောင်း က စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်အားနှုန်းပါပဲ။ သဲအိတ်ထိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ရတာတွေ အပြင် မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလွန်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် အေးမြတဲ့ ရာသီဥတု ရှိပေမယ့် စစ်သားတွေဟာ ကြေးနီရောင်သန်းနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာရပါတယ်။
တကယ်လို့ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်သားတစ်ယောက် က သူတို့ လိုက်နာရတဲ့ စည်းကမ်းတွေ ၊ ထိန်းချုပ်ရတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရပ်တွေ အကြောင်း ကို ပြောပြတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လက်ခံချင်မှ လက်ခံမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆွဲကြည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ လက်ခံသွားပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ လက်တွေဟာ ကျောက်ခဲလို မာကြောနေတာကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်လို့ပါ။
2.ရုရှား ရဲ့ Spetsnaz
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆိုဗီယက် တပ်နီတော် ပါ။ အဲဒီတုန်းက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ ရှိခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ပြည်နယ်တွေကနေ နိုင်ငံတွေအဖြစ် ခွဲထွက်သွားတဲ့အတွက် ရုရှ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ပြန်လည် တည်ရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အင်အားအကြီးဆုံး စစ်တပ်ထဲမှာ တပ်နီတော် ရဲ့ သွေးမျိုးဆက်တွေ ခိုအောင်းလို့ နေပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ထင်ရှားတာက ရုရှား Spetznet အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Spetznet အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ရုရှားထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ GRU ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။နာမည်ကျော် KGB၊ MVD အဖွဲ့တွေထက် လည်း နှစ် ၂၀ နီးပါးလောက် စောပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ခင် ၁၉၄၀ မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ပြီး ဖွဲ့စည်းတုန်းက တပ်နီတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကနေ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲခဲ့ပြီး ၁၉၄၉ စစ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ သီးခြား တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲ တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ တာဝန် က စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ရန်သူ့ နောက်ပိုင်းကို စိမ့်ဝင်ပြီး (အသွင်အမျိုးမျိုး) နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး၊ အထောက်အပံ့တွေ မှန်သမျှကို ခြေမှုန်းဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Spetznet တပ်ဖွဲ့ တပ်သားတိုင်း ဟာ အထူးလက်နက်ကိုင်တွယ်မှုသင်တန်း၊ ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း၊ လက်ဖြောင့်သင်တန်း၊ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းရေး သင်တန်း၊ အနီးကပ် တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းတွေအပြင် သူနာပြုသင်တန်း တွေကိုပါ တက်ရောက် သင်ကြားရပါတယ်။ Spetznet အဖွဲ့ဟာ ထောက်လှမ်းရေး ကို အခြေခံတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပေမယ့် စစ်တပ်ထက်တောင် ပိုပြီး စွမ်းရည်မြင့်မား ရတဲ့ အချက်က သူတို့ ဟာ စစ်ပညာကိုရော ၊ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ပညာကိုပါ သင်ကြားရအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Spetznet တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက် က ဒါဟာ စစ်ပွဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နာကျင်မယ်။ ဒါကြောင့် နာကျင်မှု ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိဖို့ တင်ကြို လေ့ကျင့်ဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီ လေ့ကျင့်မှုအတွက် တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ကို ချမှတ်ထားပြီး တပ်သားတိုင်း ဟာ စည်းကမ်းတိုင်းကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရပါတယ်
တောင်အာဖရိက ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် နဲ့ အတူတူ စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် တောင်အာဖရိက တပ်ဖွဲ့တွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကို သူများတပ်ဖွဲ့တွေထက် ၂ ဆ နီးပါး ပိုမို မြှင်တင်ပြီး ကျင့်ယူပါတယ်။
ဥပမာ မတ်တပ်ရပ်ရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာ၊ အစာမရှိပဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားတာတွေ အပြင် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မာကြောမှုအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။
တပ်သားတိုင်းဟာ ရဲသင်တန်း၊ ထောက်လှမ်းရေး သင်တန်းတွေအပြင် ၊ စစ်သင်တန်းတွေပါ တက်ရောက်ရတဲ့အတွက် တပ်သားတစ်ယောက် ဟာ ၃ မျိုးစလုံး တတ်သိနားလည်နေပါတယ်။
ထရိန်နင် လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေမှာဆိုရင် တစ်ခါတလေ ရိက္ခာခွဲတမ်း မချပေးဘဲ လေ့ကျင်စေပြီး ရှိတဲ့နေရာက တွေ့တဲ့ သစ်သီးသစ်ဖု နဲ့ အသက်ဆက်ပြီး ကြံ့ခိုင်စေဖို့ မောင်းနှင်ပေးပြီး စည်းကမ်းမလိုက်နာနိုင်ပါကလည်း တပ်က ထုတ်ပစ်ဖို့ ဗနှာင့်နှေးနေခြင်း မရှိပါ။
စဈတပျတိုငျးဟာ မ တဈထောငျသားတှေ တကျရောကျကွတဲ့ ၊ လာရောကျ အမှုထမျးကွတဲ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈတာနဲ့ အညီ အုပျခြုပျရတာ မလှယျကူလှပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ စဈတပျတိုငျးလိုလိုမှာ စညျးကမျးကို အဓိက ထားပွီး တငျးတငျးကွပျကွပျ တားမွဈအုပျခြုပျပွီး စညျးကမျး ဖောကျဖကျြ ရငျလညျး ပွငျးပွငျးထနျထနျ အရေးယူ အပွဈပေးလရှေိ့ပါတယျ။
အောာကျမှာ ဖျောပွထားတာ က အဲဒီလို စညျးကမျးတငျးကပျြပွီး အုပျခြုပျမှုစှမျးရညျကောငျးတဲ့ စဈတပျတှထေဲက ထိပျထပျကွဲတှေ ကို ရှေးထုတျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
၁၀ သွစတွေးလြ ရဲ့ Z Force
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးမှာ ထငျရှားခဲ့တဲ့ စဈသားတှထေဲမှာ အပါအဝငျ ဖွဈတဲ့ Z Special Unit ဟာ တကျကွှတဲ့ လူငယျတှရေဲ့ စညျးကမျးသဝေပျမှု ၊ အမိနျ့နာခံတတျမှုတှကွေောငျ့ အထူး ထငျရှားခဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာ ကနေ ကမျးတကျလာမယျ့ ဂပြနျဖကျဆဈတှေ ရဲ့ အန်တာယျကို တှနျးလှနျဖို့ အဓိက စိုငျးပွငျးခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒုတိယကမ်ဘာစဈ ၄ နှဈတာ ကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေမှာတော့ ဖကျြသိမျးလိုကျပွီ ဖွဈတဲ့ Z Special Unit ဟာ အဲဒီတုနျးက ထောကျလှမျးရေး ၊ တိုကျခိုကျရေး နဲ့ လူနာပွုစုရေး သုံးမြိုး ကို အဓိက တာဝနျယူပါတယျ။
သွစတွေးလြ ရဲ့ နာမညျကြျော တီဗှီစီးရီး ဖွဈတဲ့ Spy Force မှာ သူတို့ နဲ့ ပတျသကျတာတှကေို မွငျတှနေို့ငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ဂပြနျတှေ ဟာ စင်ျကာပူကြှနျးနိုငျငံကို ၀ငျရောကျသိမျးပိုကျခြိနျမှာ ဂပြနျရတေပျသဘောင်ျတှကေို ကောငျးကောငျးမွုပျပဈနိုငျခဲ့တဲ့ တပျဖှဲ့အဖွဈ လူသိမြားပွီး သူတို့ ရဲ့ အောငျပှဲတှဟော စညျးကမျးတငျးကပျြမှုကနေ ရရှိခဲ့တယျ လို့ ဆိုပါတယျ။
၉ တရုတျပွညျ့သူ့ လှတျမွောကျရေး တပျမတျော
မာနထောငျလှားမှု နဲ့ မြိုးခဈြစိတျ ဟာ ကှဲပွားခွားနားတဲ့အကွောငျး ကို ငယျစဉျကတညျး က သငျကွားပေးတဲ့ တပျမတျောတဈခု ဖွဈပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံး စဈတပျတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံမှာ ဥပဒေ အရ စဈမှုမထမျးမနရေ ဥပဒေ ပွဌာနျးထားပွီး အရှယျရောကျတဲ့ ယောကျြားတိုငျးဟာ အနညျးဆုံး ၂ နှဈကနေ ၃ နှဈ အထိ စဈမှုထမျးရပါတယျ။ Zhurihe စဈအခွစေိုကျစခနျးမှာ သငျကွားပေးတဲ့ သငျခနျးစာတှထေဲမှာ မွပွေငျတိုကျပှဲ နဲ့ အတူတူ ကမျးတကျတိုကျပှဲ ၊ ပငျလယျပွငျတိုကျပှဲတှကေိုလညျး သငျကွားပေးပွီး လကွေောငျးတိုကျပှဲတှေ အတှကျတော့ သီးခွားနရောတဈခု ထားရှိပါတယျ။ လကွေောငျးပဈကူ နဲ့ မွပွေငျတိုကျပှဲ နဲ့ ပေါငျးစပျလကေ့ငျြ့ရမယျ့ နရောကလညျး သီးသနျ့ တဈခု ဖွဈပွီး ကွညျး၊ ရေ ၊ လေ ၃ မြိုးစလုံးအတှကျကတော့ သငျတနျးတိုငျးကနေ ထူးထူးခြှနျခြှနျ နဲ့ အောငျမွငျလာခဲ့ပွီး စဈတပျထဲမှာလညျး ဆကျလကျပွီး အမှုထမျးခငျြတဲ့ သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး ဌာနခြုပျတဈခု ဖှငျ့လှဈထားရှိပါတယျ။
တရုတျပွညျ့သူ့လှတျလပျရေး တပျမတျောမှာ အမြားအားဖွငျ့တော့ အမွဲတမျး စဈသညျအငျအား အမြာအးပွား ရှိနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့ အဲဒီလို မြားပွားရသလဲဆိုတော့ ကှနျမွူနဈပါတီ မှာ ကဒေါ အဖှဲ့ဝငျမိသားစုတှေ အမြားအပွား ရှိပါတယျ။ အဲဒီ အဖှဲ့ဝငျတှထေဲကမှ မိသားစုတှေ ရဲ့ သား၊ သမီးတှေ ကို ငယျစဉျကတညျးက စဈတပျ စညျးကမျးအတိုငျး သငျယူနိုငျဖို့အတှကျ မောငျးနှငျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရုတျ တပျမတျော ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံး ဖွဈနခေဲ့ပွိး အသကျအရှယျငယျငယျကတညျးက လလေ့ာကကျြမှတျခဲ့ရတဲ့ အခွခေံစညျးမဉျြးတှေ က နသေားကနြပွေီ ဖွဈတဲ့အတှကျ အနာဂတျမှာ တပျမတျော ဟာ အရညျအသှေး မြားစှာ ပွညျ့ဝ လာခဲ့ပါတယျ။ ငယျစဉျကတညျးက ကလေးတှကေို ထောကျပံ့ပေးဖို့ နဲ့ စညျးကမျးတကြ မှေးမွူဖို့ အတှကျ ရနျပုံငှေ တဈခု ထားရှိပွီး အနာဂတျအတှကျ ပွငျဆငျကွရပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ အသကျအရှယျရလာတဲ့အခြိနျမှာ တပျမတျောမှာ မပြျောခဲ့ရငျလညျး ထှကျခှာဖို့ အတှကျ အလှယျတကူ ခှငျ့ပွုပွီး ဘယျလို စညျးမဉျြးမှ ခြုပျနှောငျထားခွငျး မရှိပါဘူး ။ စဈသား တဈယောကျ ရဲ့ ဘဝ ဟာ မလှယျကူပါဘူး ။ နောကျဆုံးတဈနမှေ့ာတော့ တပျမတျောက နုတျထှကျသှားတဲ့တိုငျ စညျးကမျးလိုကျနာခွငျး ဆိုတဲ့ ပုံစံကောငျးတဈခု ကို သငျကွားပေးလိုကျနိုငျပါတယျ။
၈ ဖိလဈပိုငျ NAVSOG & CGSOG
ဖိလဈပိုငျတပျမတျောကို လူသိမမြားပမေယျ့ ဖိလဈပိုငျတောငျပိုငျးမှာ ပွောကျကြားစဈတှေ ဆငျနှဲနရေတဲ့ သူပုနျတှေ နဲ့ တိုကျခိုကျနရေတာ က တဈကွောငျး ၊ ရတေပျစခနျး လာဖှငျ့ထားတဲ့ အမရေိကနျစဈပညာတှကေို သငျကွားနရေတာက တမြိုး။ အဲဒါတှကွေောငျ့ပဲ တိုကျရညျခိုကျရညျ ပွညျ့ဝပွီး နိုငျငံတကာ စငျမွငျ့မှာ ထငျပျေါစပွုလာပါတယျ။
စညျးကမျးပွညျ့ဝဖို့အတှကျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ စညျးကမျးကိုသာ စညျးကမျး လို့ မှတျယူခဲ့ရငျတော့ မှားပါလိမျ့မယျ။ စညျးကမျး သဘောတရားမှာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပါ ပါရှိပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျဗိုလျမှူးတဈယောကျ ဟာ အရကျအလှနျအကြှံ့သောကျပွီး ပွနျလာခဲ့ရငျ သူ့ထကျ အဆငျ့နိမျ့တဲ့ (တပျသားအဆငျ့) လှညျ့ကငျးတှနေဲ့ တှခေဲ့တဲ့ အခါမြိုးတှမှော အရေးယူ အပွဈပေးခံရပါမယျ။ အဲဒီ သံမဏိ ကို ဖိလဈပိုငျ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျအထိ သိရှိနားလညျထားပါတယျ။
အရကျသောကျခှငျ့ မရှိဘူး လား ဆိုတော့ မဟုတျပါ။ သောကျခှငျ့ ရှိပမေယျ့ စဈဆေးရေးက စဈဆေးလိုကျတဲ့အခါမှာ အရမျးကို ဆိုးရှားလှနျးတဲ့ အခွအေနေ ရောကျခဲ့ရငျ သူ ဟာ သူ့ရဲ့ တပျကို ဘယျလို စောငျ့ရှောကျနိုငျမလဲ .. ? အခု အခြိနျမှာ စခနျးထဲကို ရနျသူ ၀ငျလာခဲ့ရငျ သူ ဘယျလို ခုခံမလဲ ??? ဆိုတဲ့အခကျြတှနေဲ့ အတူတူ ကှာတားခပြွီး ဖိုငျးတပျခံရပါလိမျ့မယျ။ ခွောကျမိုငျလောကျကို မရပျမနား ပွေားရပါမယျ။ ၁၈ မိုငျ လောကျကို မရပျမနား ရကေူး ရပါမယျ။ အရငျက အမညျးစကျတှလေညျး ရှိခဲ့မယျ ဆိုရငျတော့ ရာထူးဖွုတျ၊ စဈထောငျပို့ ပွီး စဈသားဘဝ ကို တဈခါတညျး နှုတျဆကျရပါလိမျ့မယျ။
အခု အခြိနျထိတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှား ဥပမာ တှေ မရှိသေးပမေယျ့ အထကျအရာရှိတိုငျးကတော့ သူ့လကျအောကျငယျသား တဈယောကျယောကျ က သူ့ကို ပွနျလညျ ဖမျးဆီးသှားမှာကို ကွောကျကွတဲ့အတှကျ ထိနျးသိမျးကွပါတော့တယျ။
ဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့ပေးလိုကျမှု ပဲ ဖွဈပွီး သတိပေးခကျြ ဒုတိယအဆငျ့မှာတငျ အားလုံးက စညျးကမျးကို နားလညျသှားကွပါတယျ။
7.အမရေိကနျရတေပျ NAVY SEALs
အမရေိကနျ ရတေပျ နဗေီဆီးလျ ကို တော့ သိကွမှာပါ။ ပငျလယျဖြံ လို့ အမညျပွောငျ မှညျ့ချေါထားပွီး အမရေိကနျနိုငျငံက အထူးစဈဆငျရေး အဖှဲ့ ဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျရတေပျရဲ့ အဖှဲ့ခှဲတဈခု ဖွဈပွီးတော့ နာမညျက SEAL ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပာယျကတော့ ပငျလယျ (SEa) ၊ လကွေောငျး (Air) နဲ့ ကုနျးကွောငျး (Land) တို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈတှအေတှငျးမှာ ကမ်ဘာကြျော အကွမျးဖကျ ခေါငျးဆောငျ အိုစမာဘငျလာဒငျ ကို ဖမျးဆီးသတျဖွတျနိုငျခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ အသခေံတပျသား လကျမရှံ့တှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
နဗေီဆီးလျ တှကေို ၁ ကနေ ၈ အထိ ဖှဲ့စညျး ထားပါတယျ..။ တဈဖှဲ့စီမှာ တပျစု ၆စု စီ ရှိပွီး တပျစုတဈစုစီမှာတော့ တပျဖှဲ့ဝငျ ၁၆ ယောကျ ရှိပါတယျ။
စဈသညျ ၁၃ ယောကျ အရာရှိနှဈယောကျနဲ့ ကှနျမနျဒါ တဈယောကျစီ နဲ့ ဖှဲ့စညျးပါတယျ..။ တပျစု တဈစုလုံး လှုပျရှားတာ နညျးပါတယျ ..။ တျောတျောကွီးတဲ့ မဈရှငျကမြှ တပျစုတဈစုလုံး သုံးပွီး အမြားအားဖွငျ့ကတော့ တပျစိတျ နှဈစိတျ ခှဲပွီး အဲဒီ ထဲကမှ တပျဖှဲ့ဝငျ လေးယောကျစီနဲ့ လှုပျရှားလရှေိ့ပါတယျ..။
ဘကျပေါငျးစုကနေ ထူးခြှနျထကျမွကျနေအေောငျ အမွဲမပွတျ လကေ့ငျြ့နကွေတဲ့ အမရေိကနျ ရတေပျရဲ့ စဈသားတှဟော အရမျးကို စညျးကမျးလိုကျနာ ရပွီး တသှမေတိမျး တိကရြတဲ့အဆငျ့ထိ လကေ့ငျြ့ရပါတယျ။ ရတေပျက အဖှဲ့ခှဲတဈခု ဖွဈပမေယျ့လို့ ကွညျး၊ရေ၊လေ စဈဆငျရေးတှမှော ကြှမျးကငျြအောငျ လကေ့ငျြ့ခံထားရသူတှပေါပဲ။
သငျတနျးသား အသဈစုဆောငျးတဲ့နရေမှာတော့ သငျတနျးအလိုကျ ရာခိုငျနှုနျးကို မှတျသားထားပွီး သငျတနျးပွီးဆုံးခြိနျမှာ ရ၅ ရာခိုငျနှုနျးအထကျ အောငျခကျြ မရှိရငျ ထုတျပယျခံရပါတယျ။
အိန်ဒိယ စဈတပျမှာ သုံးစှဲတဲ့ တဈခုတညျးသော စကားလုံးက “စညျးကမျး” ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အထကျတနျးမှာ အမှတျကောငျးလို့ တပျထဲ ရောကျလာခဲ့လညျး စညျးကမျးပိုငျး နဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးမှု နညျပါးတယျ ဆိုရငျ ၃ လ နဲ့ တပျကနေ နှုတျဆကျရလရှေိ့ပါတယျ။
သူတို့ကတော့ အခြိနျဇယား အတိုငျး လေ့ကငျြ့ပွီး အဲဒီ အခြိနျဇယားတှမှော အိပျခြိနျ၊ နဲ့ အနားယူခြိနျ၊ အားကစား အခြိနျတှပေါ သမမြှတအောငျ ရောစပျထားတဲ့အတှကျ နညျးနညျး မှ ခိုကပျနလေို့ မရပါဘူး။
ရခေဲတမြှ အေးစကျတဲ့ ရထေဲမှာ နာရီပေါငျး မြားစှာ စိမျခံရခွငျး၊ မွကွေီးပျေါမှာ စုတျပွတျသတျနအေောငျ မိကြောငျးသှား သှားရခွငျး နဲ့ တခွား ကွမျးတမျးတဲ့ ပွဈဒဏျမြားစှာကို ပွဌာနျးထားပါတယျ။
5.အစ်စရေး Shayetet 13
အစ်စရေး ဟာ အယူအဆမတူညီတဲ့ နိုငျငံတှကွေားမှာ နထေိုငျရတဲ့ နိုငျငံပီပီ သူရဲ့ စဈတပျကိုလညျး ထူးခြှနျထကျမွကျနအေောငျ အမွဲလို ပွငျဆငျနလေရှေီ့ပါတယျ။
အဲဒီ အစ်စရေးတပျမတျောထဲကနေ တိုးထှကျလာပွီး ထူးခြှနျတဲ့စဈဆငျရေးတှနေဲ့ အတူတူ လူသိမြားလာတာက Shayetet 13 ပါ။ Shayetet 13 ဟာ အမရေိကနျ က ထိပျထိပျကွဲ တပျဖှဲ့တှနေဲ့ အတူတူ စဈရေး လကေ့ငျြ့ခှငျ့ရလိုကျခွငျး က ထိပျတနျးအဆငျ့ တပျဖှဲတဈခု ဖွဈလာစတေယျ လို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။
အတူတူ ပူးတှဲပွီး ကွညျး၊ ရေ ၊ လေ စဈဆငျရေးတှကေို ပူးတှဲလကေ့ငျြ့နတေဲ့ အဖှဲ့တှထေဲမှာ နဗေီဆီးလျ အကွောငျး ကို သိပွီး လောကျပွီဆိုရငျ နောကျထပျတဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Delta Force အကွောငျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ။
Delta Force (အမရေိကနျ) အဖှဲ့ ဟာ နာမညျမြိုးစုံရှိပွီး သတငျးအခကျြအလကျတှနေဲ့ သူတို့ ရဲ့ တပျဖှဲ့အကွောငျး၊ တပျဖှဲ့မိသားစုဝငျတှေ အကွောငျးကို ခွရောခံလို့ မရအောငျ အမွဲတမျးလို ကိုယျယောကျဖြောကျနလေရှေိ့တဲ့ တပျဖှဲ့တဈခု ဖွဈပါတယျ။ Delta Force ဆိုတဲ့ အမညျနာမ နဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှဈအထိ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာကြျော စဈဆငျရေး အထူးတပျဖှဲ့ဖွဈပွီး အမရေိကနျရဲ့ အလြှို့ဝှကျဆုံးတပျဖှဲ့တဈခု လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဗွိတိနျ ရဲ့ အထူးထောကျလှမျးရေး Special Agent Service (SAS တပျဖှဲ့) ကနေ စတငျပွီး အုတျမွဈခြ ဖှဲ့စညျးပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီ အဖှဲ့ဟာ စဈတပျမဆနျဘဲ သူလြှို နဲ့ ထောကျလှမျးရေး ဘကျခွမျးကို ပိုပွီး လှုပျရှားဖို့ ရညျရှယျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အကွမျးဖကျနှိမျနှငျးရေး၊ ဓားစာခံကယျတငျခွငျး စတဲ့ အထူးစီးနငျး တိုကျခိုကျမှုတှကေို နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ရဲ့ အမိနျ့အရ ဆောငျရှကျပါတယျ။ Delta Force က ပွညျထဲရေးဌာန နဲ့ ပိုပွီး ဆကျနှယျနပေမေယျ့ ၀နျထမျေးတှကတော့ အမရေိကနျစဈတပျအတှငျး ကနေ သာ လြှောကျထားခှငျ့ရှိပွီး အပွငျလူ လုံးလုံး လကျမခံပါ။ နညျးစနဈ​ပိုငျး၊ ပဈခတျမှု အပိုငျး ၊ ကယျတငျမှု အပိုငျး ၊ နှိမျနငျးမှု အပိုငျး တှနေဲ့ အတူတူ ကဉျြးထဲကွပျထဲ မှာ ရုနျးထှကျဖို့ နဲ့ တိုကျခိုကျဖို့ တှကေို ပိုပွီး ဦးစားပေး သငျကွားပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အဆငျ့သတျမှတျခကျြမှာ အဆငျ့ ၃ ရှိတဲ့အတှကျ ထူးခြှနျတဲ့ ပညာရပျတှနေဲ့ အတူတူ တိုကျခိုကျရညျပွညျ့ဝခွငျး ၊ အမိနျ့နာခံခွငျး ၊ စညျးကမျးသဝေပျခွငျး တို့ က သူတို့ရဲ့ ဂုဏျဒွပျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Shayetet 13 ဟာ ကမ်ဘာကြျောတပျဖှဲ့တှနေဲ့ အတူတူ ယှဉျတှဲလကေ့ငျြ့ခှငျ့ရပွီး နောကျ တဈစစ အစှမျးပိုထကျလာပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ တိုကျခိုကျရေး နညျးပညာတှနဲ့ ကာကှယျရေး အငျအားစုကိုတော့ ဘယျတော့မှ ပျေါပျေါတငျတငျ ထုတျဖျောမပွောကွားပါဘူး ။
4ဗွိတိနျနိုငျငံ ရဲ့ MI6
တကယျလို့ ဂြိမျးဈဘှနျးဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ခဲ့ဖူးတယျ ဆိုရငျ MI6 ကို သိရှိမှာပါ။ အနညျးဆုံးတော့ Mr.Bean မစ်စတာဘငျးကို ကွညျ့ဖူးရငျတောငျမှ ဒီ အဖှဲ့ကို သိမှာပါ။ သူတို့ ဟာ အထူးထောကျလှမျးရေး တပျဖှဲ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို ထောကျလှမျးရေး တှလေို့ မချေါပဲ လြို့ဝှကျလူသတျသမားမြား အဖွဈသာ ချေါဆိုကွပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိတဲ့ လူသဈတှကေို စုဆောငျးတဲ့နရောမှာ အဲဒီ လူငယျ ဟာ ဘယျလို မြိုး စညျးကမျးတှကေို လိုကျနာတတျသလဲ ဆိုတဲ့ အခကျြ ၁ ခကျြကိုပါ ထညျ့သှငျး စဉျးစားပါတယျ။
သူတို့ရဲ တပျဖှဲ့ဟာ Secret Intelligence Service (SIS) အောကျမှာ ရှိပွီး အဲဒီ အဖှဲ့ကိုတော့ MI6 လို့ ချေါပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ထငျထငျရှားရှား သိတဲ့ ဂြိမျးဈဘှနျး ဟာ MI6 က လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေး သမား အမှတျစဉျ (၀၀၇) ဖွဈပါတယျ။
MI5 ကတော့ တဈနိုငျငံလုံးရဲ့ လုံခွုံရေး တာဝနျခံ The Security Service ကို ချေါဆိုတာဖွဈပွီး ဗွိတိနျဘုရငျမ ရဲ့ လကျအောကျမှာ ထားရှိပွီး ဘုရငျမကိုယျတိုငျ တိုကျရိုကျအုပျခြုပျပါတယျ။
အဲဒီမှာ ၅ တို့ ၊ ၆ တို့ ဆိုတဲ့ နံပါတျတှဟော သကျဆိုငျရာ Section ကို ကိုယျစားပွုတာ ဖွဈပါတယျ။ ဘဏျခှဲ ၃ တို့ ၊ ဘဏျခှဲ ၄ တို့ နဲ့ ဆငျတူပွီး နံပါတျတှကှေဲပွား သလို လုပျဆောငျခကျြလညျး ကှဲပွားပမေယျ့ MI (Military Intelligence) ဌာနခြုပျကတော့ တဈခုတညျး ပါပဲ ။
ဂြိမျးဈဘှနျးကားတှထေဲမှာ သဏ်ဍနျလုပျ ပါဝငျတဲ့ Agent Q ဆိုတာ အပွငျမှာလညျး တကယျ ရှိတာ ဖွဈပွီး Agent Q ဟာ အဖှဲ့ဝငျတိုငျးအတှကျ လကျနကျခဲယမျးမီးကြောကျ၊ ပစ်စညျးကိရိယာ နဲ့ နညျးပညာတှကေို ပံ့ပိုးဖို့ တာဝနျယူရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရုပျရှငျထဲမှာလိုတော့ မိနျးကလေး တှနေဲ့ ရှုပျပှနေလေို့ မရဘဲ စညျးကမျးကို အတငျးကွပျဆုံး ဥပဒေ အဖွဈ သဘောထားရပါတယျ။ ဒီနရေမှာ MI6 အဖှဲ့ဝငျတိုငျးအဖို့ သူတို့ကိုယျစီ ရဲ့ စညျးကမျး ဟာ သူတို့ကိုယျစီ ရဲ့ “ အသကျ “ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ စညျးကမျးဖောကျရငျ “ အသကျ” ပေးလိုကျရမှာ သခြောပါတယျ။
3ွေ.မာကျကိုရီးယားရဲ့ မုနျတိုငျး တပျဖှဲ့
မွောကျကိုးရီးယားစဈတပျဟာလညျး စညျးကမျးလိုကျနာမှု အရှိဆုံး နဲ့ အထူးခြှနျဆုံး တပျသားတှေ အဖွဈ ရှေးထုတျပွရမှာပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုရီးယား ကြှနျးဆှယျ ရဲ့ ကောငျးကငျမှာ တိမျတှေ မရှိတော့ဘဲ လေးရာသီလုံးလုံး စဈရိပျ၊ စဈငှေ့ တှသော ယှကျသနျးနလေရှေိ့တယျ လို့ ပွောပွရငျ လှနျလိမျ့မယျ မထငျပါဘူး ။ ခတျေမှီလှနျးလှတဲ့ လကျနကျ တှကွေောငျ့ မွောကျကိုရီးယား စဈတပျကို တျောရုံ နဲ့ တော့ အထငျမသေးရဲပါဘူး။ နောကျတဈကွောငျး က စဈတပျရဲ့ လုပျအားနှုနျးပါပဲ။ သဲအိတျထိုး လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ၊ သဲသောငျပွငျပျေါမှာ လကေ့ငျြ့ရတာတှေ အပွငျ မရမေတှကျနိုငျအောငျ မြားပွားလှနျးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကွေောငျ့ အေးမွတဲ့ ရာသီဥတု ရှိပမေယျ့ စဈသားတှဟော ကွေးနီရောငျသနျးနတေဲ့ ကိုယျခန်ဒာတှကေို ပိုငျဆိုငျလာရပါတယျ။
တကယျလို့ မွောကျကိုးရီးယား စဈသားတဈယောကျ က သူတို့ လိုကျနာရတဲ့ စညျးကမျးတှေ ၊ ထိနျးခြုပျရတဲ့ ကငျြ့ဝတျတှနေဲ့ တတျကြှမျးတဲ့ ပညာရပျတှေ အကွောငျး ကို ပွောပွတဲ့အခါမှာ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ လကျခံခငျြမှ လကျခံမိပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကို လကျဆှဲနှုတျဆှဲကွညျ့ပါ။ အဲဒါဆိုရငျတော့ လကျခံသှားပါပွီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ လကျတှဟော ကြောကျခဲလို မာကွောနတောကို တှရေ့မှာပဲ ဖွဈလို့ပါ။
2.ရုရှား ရဲ့ Spetsnaz
ဒုတိယကမ်ဘာစဈတုနျးက ရှပျရှပျခြှံခြှံ တိုကျခိုကျခဲ့တဲ့အတှကျ ထငျရှားခဲ့တဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဆိုဗီယကျ တပျနီတျော ပါ။ အဲဒီတုနျးက ဆိုဗီယကျပွညျထောငျစု အနနေဲ့ ရှိခဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာတော့ ပွညျနယျတှကေနေ နိုငျငံတှအေဖွဈ ခှဲထှကျသှားတဲ့အတှကျ ရုရှ နိုငျငံ အနနေဲ့ ပွနျလညျ တညျရှိခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဒုတိယ အငျအားအကွီးဆုံး စဈတပျထဲမှာ တပျနီတျော ရဲ့ သှေးမြိုးဆကျတှေ ခိုအောငျးလို့ နပေါတယျ။
အဲဒီထဲမှာ ထငျရှားတာက ရုရှား Spetznet အထူးစဈဆငျရေးတပျဖှဲ့ ဖွဈပါတယျ။ Spetznet အထူးတပျဖှဲ့ဝငျတှဟော ရုရှားထောကျလှမျးရေး တပျဖှဲ့ GRU ရဲ့ အုပျခြုပျမှုအောကျမှာ ရှိနပေါတယျ။နာမညျကြျော KGB၊ MVD အဖှဲ့တှထေကျ လညျး နှဈ ၂၀ နီးပါးလောကျ စောပွီး ဒုတိယကမ်ဘာစဈ မဖွဈခငျ ၁၉၄၀ မှာ စတငျပျေါပေါကျလာတာဖွဈပါတယျ။
စတငျပွီး ဖှဲ့စညျးတုနျးက တပျနီတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးကနေ တိုကျရိုကျကှပျကဲခဲ့ပွီး ၁၉၄၉ စဈပွီးဆုံးခြိနျမှာတော့ သီးခွား တိုကျခိုကျရေးတပျခှဲ တဈခု အဖွဈ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ တာဝနျ က စဈပှဲကာလအတှငျးမှာ ရနျသူ့ နောကျပိုငျးကို စိမျ့ဝငျပွီး (အသှငျအမြိုးမြိုး) နဲ့ ဆကျသှယျရေး၊ အထောကျအပံ့တှေ မှနျသမြှကို ခွမှေုနျးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Spetznet တပျဖှဲ့ တပျသားတိုငျး ဟာ အထူးလကျနကျကိုငျတှယျမှုသငျတနျး၊ ဖောကျခှဲရေးသငျတနျး၊ လကျဖွောငျ့သငျတနျး၊ အကွမျးဖကျ နှိမျနှငျးရေး သငျတနျး၊ အနီးကပျ တိုကျခိုကျရေး သငျတနျးတှအေပွငျ သူနာပွုသငျတနျး တှကေိုပါ တကျရောကျ သငျကွားရပါတယျ။ Spetznet အဖှဲ့ဟာ ထောကျလှမျးရေး ကို အခွခေံတဲ့ အဖှဲ့ဖွဈပမေယျ့ စဈတပျထကျတောငျ ပိုပွီး စှမျးရညျမွငျ့မား ရတဲ့ အခကျြက သူတို့ ဟာ စဈပညာကိုရော ၊ လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေး ပညာကိုပါ သငျကွားရအတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ Spetznet တပျဖှဲ့ရဲ့ ယုံကွညျခကျြ က ဒါဟာ စဈပှဲဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ နာကငျြမယျ။ ဒါကွောငျ့ နာကငျြမှု ဒဏျကို ခံနိုငျရညျ ရှိဖို့ တငျကွို လကေ့ငျြ့ဖို့ လိုတယျ။ အဲဒီ လကေ့ငျြ့မှုအတှကျ တငျးကပျြတဲ့ စညျးကမျးတှေ ကို ခမြှတျထားပွီး တပျသားတိုငျး ဟာ စညျးကမျးတိုငျးကို မဖွဈမနေ လိုကျနာရပါတယျ
တောငျအာဖရိက ဟာ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ မွမေကျြနှာသှငျပွငျ နဲ့ အတူတူ စဈမကျဖွဈပှားနတေဲ့ နိုငျငံတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ တောငျအာဖရိက တပျဖှဲ့တှဟော ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ တှကေို သူမြားတပျဖှဲ့တှထေကျ ၂ ဆ နီးပါး ပိုမို မွှငျတငျပွီး ကငျြ့ယူပါတယျ။
ဥပမာ မတျတပျရပျရငျးနဲ့ အိပျပြျောနိုငျအောငျ ကွိုးစားတာ၊ အစာမရှိပဲ နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားတာတှေ အပွငျ စိတျဓါတျပိုငျးဆိုငျရာ မာကွောမှုအတှကျလညျး ပွငျဆငျထားကွတယျ။
တပျသားတိုငျးဟာ ရဲသငျတနျး၊ ထောကျလှမျးရေး သငျတနျးတှအေပွငျ ၊ စဈသငျတနျးတှပေါ တကျရောကျရတဲ့အတှကျ တပျသားတဈယောကျ ဟာ ၃ မြိုးစလုံး တတျသိနားလညျနပေါတယျ။
ထရိနျနငျ လုပျတဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးစခနျးတှမှောဆိုရငျ တဈခါတလေ ရိက်ခာခှဲတမျး မခပြေးဘဲ လကေ့ငျြစပွေီး ရှိတဲ့နရောက တှတေဲ့ သဈသီးသဈဖု နဲ့ အသကျဆကျပွီး ကွံ့ခိုငျစဖေို့ မောငျးနှငျပေးပွီး စညျးကမျးမလိုကျနာနိုငျပါကလညျး တပျက ထုတျပဈဖို့ ဗနှာငျ့နှေးနခွေငျး မရှိပါ။
အေဗရာဟမ်လင်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစီနဖာအကြောင်းအရာ အပိုင်း ၂
အေဗရာဟမ်လင်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစီနဖာအကြောင်းအရာ ၂ 11.အမေရိကန် ရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းမှာ လင်ကွန်းအမည်နဲ့ မြို့တွေရှိပြီး အချို့ကတော့ အသစ်ပြန်လည်မှည့်ထားပါတယ်။ 12.လင်ကွန်းနဲ့ချားလ်စ်ဒါဝင်နှစ်ယောက်စလုံးဟာ တစ်နေ့တည်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သမိုင်းတစ်ခေတ်ဦးဆောင်တော်လှန်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက် နှစ်ယောက်စလုံးမှာလည်း မုတ်ဆိတ်မွှေးပါရှိပါတယ်။ 13.သမ္မတလင်ကွန်းဟာ လုပ်ကြံမခံရမီက လုပ်ကြံခံရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိပ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ်။ 14.သမ္မတလင်ကွန်းရဲ့နာရီတွင်းမှာ လျို့ဝှက်ချက်မှတ်တမ်းများစွာကိုလည်း မှတ်သားရေးခြစ်ထားပါတယ်။ 15.1846မှာ သမ္မတလင်ကွန်းဟာ လူသတ်သမားပုံပြင်တစ်ခုကိုရေးသားခဲ့ပြီး …
ဂျပန်မှာ ထုတ်ပြီး ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မုဒိန်းဇာတ်ကောင် ဂိမ်း၊ရေချိုး ချောင်းကြည့် ဂိမ်းနှင့် အခြားဂိမ်းများ
ဂျပန်မှာ ထုတ်ပြီး ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မုဒိန်းဇာတ်ကောင် ဂိမ်း၊ရေချိုး ချောင်းကြည့် ဂိမ်းနှင့် အခြားဂိမ်းများ ဂျပန်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သူတို့ နိုင်ငံက တီထွင်မှုတွေအမြဲလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သူတိ်ု့ဟာ တခါတလေကျရင် ထူးဆန်းတဲ့ တီထွင်မှုတွေလုပ်တတ်ပြီး အခုလဲ ဂိမ်း programmers နဲ့ developers တွေ တီထွင်မှုဟာ ရှိလဲဆိုတာ …
ကလေးတွေရဲ့  ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အချက်အလက်များ
ကလေးတွေရဲ့  ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အချက်အလက်များ Alcohol အရက်ကတော့ ကလေးများသာမက လူကြီးတွေကို ပါ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။အရက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေသောက်သုံး ပါက ကလေးတွေ ရဲ့  ပလက်စမာ ကြီးထွားမှု နှေးကွေးစေကြောင်းလေ့လာတွေ့  ရှိချက်တွေအရသိရပါတယ်။အရက်ကြောင့် ကလေးတွေ ရဲ့  …